Akụkọ - Etu esi emeso igwe nke nwere ike ime ihe
Esi merie eji nke imeobodo nkedo ígwè cookware
Nkedo ígwè cookware ị ketara ma ọ bụ zụta si a thrift ahịa mgbe nwere a ike shei mere nke ojii nchara na unyi, nke na-ese nnọọ wetara. Ma echegbula, enwere ike wepu ya ngwa ngwa ma nwee ike weghachite ite nkedo na ọdịdị ya.
1. Etinye igwe eji esi nri n’ime oven. Gbaa usoro ihe omume ahụ niile otu oge. Enwere ike ịgba ya ọkụ na ọkụ ma ọ bụ icheku ọkụ ruo awa 1/2 ruo mgbe onye na-esi nri iron na-acha uhie uhie. Mkpụrụ osisi siri ike ga-agbawa, daa, ma ghọọ ntụ. Chere ka pan ahụ dajụọ ma were usoro ndị a .Ọ bụrụ na ewepụ shea siri ike na nchara, jiri nchara bọọlụ hichaa ya.
2. Jiri mmiri ọkụ na ncha sachaa igwe eji esi nri. Jiri nhicha dị ọcha hichaa ya.
Ọ bụrụ n’ịzụta igwe eji eghe ihe, a na-ete ya mmanụ ma ọ bụ mkpuchi yiri ya iji gbochie nchara. A gha ewepu mmanu tupu ewepu ihe eji esi nri. Nke a dị mkpa. Gbanye na mmiri ncha dị ọkụ maka nkeji ise, sachaa ncha ma kpoo ya.
3. Mee ka onye na-eji ihe nkedo mee ihe. Nwere ike kpoo pan na stovu maka nkeji ole na ole iji jide n'aka na ọ kpọrọ nkụ. Iji merie ihe eji esi nri igwe, a ga-abanye mmanụ kpamkpam n'ime igwe ahụ, mana mmanụ na mmiri anaghị ekwekọrịta.
4. Were mmanu abuba, tinye mmanu mmanu ma obu mmanu oka n’ime n’ime na n’azu onye na-esi nri. Lezienụ anya na ite mkpuchi.
5. Tinye pan na mkpuchi n'elu ala na oven ma jiri ogo dị elu (150 - 260 ℃, dabere na mmasị gị). Kpoo ọkụ ma ọ dịkarịa ala otu awa iji mepụta oyi akwa "mesoo" n'elu pan ahụ. Ihe mkpuchi a dị n’elu pụrụ ichebe ite ahụ pụọ nchara na nrapado. Debe mpempe akwụkwọ aluminom ma ọ bụ nnukwu mpempe akwụkwọ na-eme achịcha n'okpuru ma ọ bụ na ala nke traktị na-eme achịcha, wee daa mmanụ. Jụụ ụlọ okpomọkụ na oven.